U-Anne Mondro uchitha iiyure ezili-1000 kwi-Wire Crocheting yokwenza iAnatomically Correct Heart | Izidalwa ezikwi-Intanethi
U-Anne Mondro uchitha iiyure ezili-1000 kwi-Wire Crocheting ukuze enze i-Anatomically Correct Heart
Umzobi U-Anne Mondro Beka ubugcisa entliziyweni ngezi ntliziyo zimangalisayo zichanekileyo ngokwendlela yokwakheka komzimba. Uyabenza ukwaluka ucingo lobhedu, kwaye siqinisekile ukuba uya kuvuma ukuba iziphumo azikho ngaphantsi zintle.
UMondro ngu utitshala Nxibelelana neYunivesithi yaseMichigan School of Art and Design. Udlule ejikeleze a Unyaka ukuphanda ubume bentliziyo Ukuqinisekisa ukuba ubugcisa bakhe babuchaneke ngendlela eyiyo. Uye wayicinga indlela yokumenza iintliziyo zithatha ubomi, kusetyenziswa isoftware ye-3D yokumodareyitha, kwaye inkqubo iyancediswa ngokuchitha ixesha kwilabhoratri ye-anatomy yeyunivesithi.
Esi siqwenga sinobuqu, uyachaza umzobi. Bendisebenza nabantu abadala ngokulahleka kwememori kunye nabakhathaleli babo. Inamandla kakhulu, kwaye yanele ukuba ibe ngumongi. Xa ukhathalela umntu omthandayo, nobabini niyadibana. Umsebenzisi uthatha ubungozi babo, kodwa kunye namandla abo. Ngelixa ucinga malunga nolwalamano, kubalulekile ukuba ezi ndlela ziboshwe ngandlela thile.
U-Anne Mondro wamkela i-BFA yakhe kwiKholeji yaseDetroit yeZifundo zoBugcisa, wagqiba isidanga sobugqirha kwiYunivesithi yaseKent State ngaphambi kokuba afudukele eAnn Arbor, eMichigan, ukuya kwenza ikhondo lomsebenzi umculi y utitshala Ukusuka kwiYunivesithi yaseMichigan.
Umsebenzi wakhe uphonononga ubunzima bomzimba kunye neemvakalelo zomzimba womntu. Ukudityaniswa kobugcisa bemveli, ubugcisa obuhle, kunye netekhnoloji yedijithali, ukwenza imifanekiso kunye nemifanekiso eqingqiweyo ephanda ubuntu.
UMondro ubonakalise umsebenzi wakhe wobugcisa kwimiboniso eyahlukeneyo yesizwe, kubandakanya 'Imiphetho yoBabalo: Ukukhuthaza, ubuGcisa obuqhelekileyo'. Kuqhelekile kwi IMyuziyam yobuGcisa epheleleyo, kwaye 'Ubomi bokuqonda: umntu'.
Umsebenzi wakhe ubonakalisiwe kwimiboniso eyedwa e IZiko leDolophu yaseArtical Art, Igalari yeArC yaseChicago, i IMyuziyam yaMazwe ngaMazwe yeeSayensi zoPhando, Igalari yePIU eSao Paulo, kwaye Igalari yeCeres eNew York. Nantsi igalari yemifanekiso.
Fuente | U-Anne Mondro
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » U-Anne Mondro uchitha iiyure ezili-1000 kwi-Wire Crocheting ukuze enze i-Anatomically Correct Heart
Lo mfoti wezithombe okhethekileyo eyoyikisayo usebenzisa abantwana bakhe kwiifoto zakhe
Ii -apps eziyi-8 zabaqulunqi ongakhange ucinge ukuba zikhona